छोरी मानेकी सपनाको नाँ गो फोटो किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ’ भन्दै दिए चेतावनी (हेर्नुस् भिडियो) | Public 24Khabar
Home News छोरी मानेकी सपनाको नाँ गो फोटो किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ’ भन्दै...
छोरी मानेकी सपनाको नाँ गो फोटो किन राखे विनयजंगले ? ‘देखाइदिउँ’ भन्दै दिए चेतावनी (हेर्नुस् भिडियो)
म र्ता क्या नहि कर्ता ? उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन् यदि मलाई कसैले धावा बोल्छ भने सबैलाई सि ध्या इ दिन्छु । उनले गोल्डन टिभी चलाउने युट्युवरले सपनालाई घेराबन्दी गरेर आफु विरुद्ध उक्साएको आरो’प लगाएका छन् । उनले आफुलाई सपनाको वे इ ज्जत गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक काम गर्न अवरोध गर्ने कसैलाई पनि म छोड्दिन । चाहे त्यो सपना रोका मगर नै किन नहोस् मैले छोड्दीन उनले भने ।
उनले आफ्ना परिवारले समेत विश्वास नगरेको बेलामा आफुले ल्याएर बीबीसीको शक्तिशाली महिला हुने अवस्था सम्म पुर्याएको दा’वी गरेका छन् । उनले आफ्नै कारणले नै सपना त्यो अवस्थामा पुगेको उनको दा’वी छ ।
Previous articleरुपा र कृष्णले छोरा संग यस्तो भिडियो सार्वजनिक गरे; क्षणभरमै १५ लाख भन्दा बढिले हेरे(भिडियो हेर्नुस्)
Next articleसपनाले भनिन् म अब आ*त्म ह*या गर्छु ।। कानुन पनि ठुलालाई नलाग्ने रहेछ भन्दै लेखिन् भावुक स्टाट्स ।।
Sarita Lama February 13, 2021 At 12:49 am